Hababka shaqooyinka oo kooban iyo buuggaag tusiyayaasha ku jira ProZ.com
In ka badan 375,000 isticmaalayaal ah, ProZ.com waa hoyga turjumaanada caalamka ugu waaweyn. Buuggaagta kale ee isugu jira shirkada turjumaada, shaqada dibada laga keeno ee luuqada (oo ay la jiraan jawaabcelin ka timid turjumaano,) arday, iyo waxyaabo badan.
Daawo dhammaan buuggaagta tusiyaha ku jira ProZ.com
Habka shaqo soo dhejinta
Habka shaqo soo dhejinta uu leeyahay dadka dibada shaqada ka keena ee raadinaya qiimaha ku bexeysa xirfadlayaal luuqadeed oo kala duwan. Helida iimeylada markii shaqooyin aad xiiseyso la soo dhejiyo. Habka shaqada waxay si aad ugu dhow la xiriirtaa "Blue Board" kaasoo ah macluumaadka shaqada dibada laga keeno ee luuqada oo la jirta jawaabcelin ka timid adeeg bixiyayaasha.
Daalacashada shaqooyinka la soo dhajiyey -Soo dheji shaqo
Qooraansi deg deg ah ee barnaamijyada laga heli karo ProZ.com
Shaqooyin & buuggaagta tusiyaha